Global Voices teny Malagasy » Sri Lanka : Nampiakatra adi-hevitra i Akon · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Oktobra 2018 4:19 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Liva Andriamanantena
Sokajy: Sri Lanka, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Mozika, Politika, Vaovao Mafana
(Marihina fa tamin'ny 25 Martsa 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Akon nanao fampisehoana. Sarin’i Celso Tavares tamin’ny alàlan’ny Funchal tao amin’ny Flickr. Lisansa Creative Commons
Mety hanontany tena angamba ianao hoe inona no mety ho vokatry ny rakikira iray? Niteraka adihevitra tao Sri Lanka ilay lahatsarin’i Akon  (na i Aliaune Badara Akon Thiam) izay sady mpihira no mpamoron-kira R&B, Sexy Chick , izay mampiseho andian-jatovovavy zara fa mitafy sady mandihy amin'ny fety iray eo amoron’ny dobo filomanosana sady manoloana ny sarivongan’i Boddha. Niseho afaka segondra vitsivitsy tao an-damosina ilay sarivongana nanjavozavo zara raha hita.
Nanana ny fandaharampotoanany hitsidika an’i Sri Lanka hanao fampisehoana i Akon ny volana ambony. Andro vitsivitsy lasa izay nanodidina teo amin’ny olona miisa 200 teo ho eo no nivory teo anoloan’ireo biraon’ny Maharaja, ny mpandraharahan’ny haino aman-jery izay nanohana ny fampisehoana, ary nitora-bato  ka naharatrana olona miisa efatra sy nanimba ilay tranobe.
Nitantara  ny vavahadim-baovaon’ny aterineto Parambara :
Nahatratra olona miisa 13.000 ny fanoherana an-tserasera ny fampisehoana izay nanomboka tamin’ny endriky ny vondrona Facebook, ary notohanan’ireo mailaka sy ireo lahatsoratra bilaogy. Niova ho fihetsika nahery setra tamin’ny faha 2-n’ny volana Martsa ny fanoherana am-bava, rehefa notafihan’ny vahoaka ny biraon’ny Capital Maharaja. Ireo sora-baventy najanona teny amin’ny toerana dia nilaza fa noho ny fampisehoana nataon’i Akon no niteraka ny fanafihana .
Tsy nijanona teo anefa izany, ary raha araka ny lahatsoratra an-gazety  iray, nifandray tamin’ny governemanta Sri Lankey ireo moanina boddista ary nangataka azy tsy hamela an’i Akon hanantanteraka fampisehoana tany Sri Lanka. Nandà ny fangatahan’i Akon visa  ny governemanta noho ny antony : « lahatsary nampiady hevitra, tononkira manafintohina sy hetsi-panoherana mahery vaika avy amin’ireo fikambanana samihafa sy ny vondrona ara-kolontsaina sy ara-pivavahana tao amin ‘ny firenena »
Namoaka fanambarana  i Akon izay nilaza fa tsy nahafantatra ny fisian’ny sarivongana izy no sady tsy nikasa hanome fanafintohinana.
Nafana ny lohahevitra tao amin’ny tontolon’ny bilaogy Sri Lankey.
Nahita ilay lahatsary mahasadaikatra i Indrajit Samarajiva tao amin’ny bilaogy indi.ca kanefa nitsikera  ireo fanafihana
Tsy maintsy manomboka amin’ny fampiharana ny bodisma ianareo raha te hiaro izany. Midika izany fa mila mipetraka irery ampahanginana fa tsy mitakoritsika ao amin’ny Facebook na ( hoy ny olona) nitora-bato.
Nitsikera ny fandrahonana ho faty natao an’i Akon  tao amin’ny Facebook i Dee tao amin’ny A Collision of Ideas ary nanolo-kevitra hoe :
Angamba tokony tsy ho tezitra loatra isika, diniho izany ary jereo izay azontsika atao hakana lesona fa tsy hoe hamono azy na hanao adalana amin’izany trangan-javatra izany.
Niantso izany ho firongatry ny fondamantalista amin’ny bodisma Sinhala  tao amin’ny Gioundviews i Kalana Senaratne
Azo antoka fa raha niteraka fahatezerana sy fankahalana ny iray na roa segondra dia mety ho ratsy kokoa raha nampiseho ny sarivongan’i Bodha na ny tempoly iray ny lahatsary iray manontolo. Indrindra indrindra ireo mpanao fihetsiketsehina izay nitabataba sy nanompa ary nitora-bato, ary anisan’izany ireo moanina, tena Boddista marina ve izy ireo?
Amin’ny maha firenena antsika angamba, dia tonga amin’ny dingana izay nahitana fihetsiketsehana tsy manjary natao tamin’ny anaran’ny Bodisma izay tokony ho tsikeraina am-panadihadiana isika. Misy ny loza lehibe izay tsy tokony hanaovana izany, satria, mazava ho azy, fa ny fahanginan’ireo izay nanelingelina ny fihetsiketsehana toy izany dia fanekena ny asa maloto rehetra natao tamin’ny anaran’ny Bodisma, ary izany dia avy amin’ny ankamaroan’ireo olona mpanao politika miafina ao ambadiky ny fivavahana.
Te-hiteny  amin’ireo izay nankahala an’i Akon tao Sri Lanka ny Going Global hoe:
Ny fiampangana rehetra izay ataon’ny vondrona ‘’Vonoy i Akon’’ dia manodidina ny sarivongana Boddha iray izay nampiasaina tao anatin’ny iray tamin’ireo lahatsariny. Takatro ankehitriny ny mety ahatonga izany ho manafintohina: ny fahitana ireo ankizivavy roa miakanjo manify sady mandihy manodidina ilay zavatra iray noheverina ho masina, ary raha misy olona manao izany ao amin’ny moske dia mety ho tezitra ihany koa aho.
Saingy tsy hanampy na iza na iza ny haromotana tamin’ny fandrenesana ny vaovao fa hiseho indray any Sri Lanka izy sy ny fandrahonana ny hamono ity zalahy ity. Ary indrindra indrindra moa fa ireo Srilankey.
Nanontany  ny A Voice in Colombo hoe : « mety ve fa raha nampiasa ny sarivongan’i Boddha avy any an-damosina ireo mpanatontosa ny lahatsarin-kira? » Namaly  ary nanontany tena amin’izay mety ho eritreritr’Andriamanitra sy Boddha ny amin’izany i London, Lanka and Drums .
Nanana ny heviny  momba ny fandavana ny visa an'i Akon ny The Puppeteer:
Toa nanana fahazarana ny handa visa ny governemanta Sri Lankey. Na dia mety ho fandraisana fepetra aza ity indray mandeha ity, fa tsy fikasana ny hamafa ny fandalovany
Na dia izany aza , nanantena ilay bilaogera fa hanao fampisehoana amin’ny daty hafa i Akon.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/16/127361/
 Sexy Chick: http://www.youtube.com/watch?v=wzNR9c82XLg
 lahatsoratra an-gazety: http://entertainment.oneindia.in/music/international/2010/sri-lanka-visa-akon-250310.html
 Nandà ny fangatahan’i Akon visa: http://www.guardian.co.uk/music/2010/mar/25/akon-sri-lanka-buddha-statue
 Nitsikera ny fandrahonana ho faty natao an’i Akon: http://mathawaada.blogspot.com/2010/03/kill-akon-really.html
 firongatry ny fondamantalista amin’ny bodisma Sinhala: http://www.groundviews.org/2010/03/25/aroused-by-akon%E2%80%99s-sexy-bitch-the-rise-of-sinhala-buddhist-fundamentalism/
 Nanana ny heviny: http://messiahofmadness.wordpress.com/2010/03/24/lets-hope-its-just-a-hitch/